Kushambadzira kwashanduka sei uye nei izvi zvave zvakakosha | ECommerce nhau
Kushambadzira kwashanduka sei uye nei izvi zvave zvakakosha
Makumi gumi apfuura vanhu vaitarisa rimwe kana maviri mapeji ewebhu chigadzirwa uye akaita sarudzo zvichienderana neruzivo irworwo. Parizvino ruzivo rwuripo pane zvigadzirwa runenge rwusingaperi. Munguva yakapfuura, makambani aive nekwanisi yekukanganisa mutengi kutenga sarudzo. Asi nhasi, vatengi vanokwanisa kutsvaga yakawanda yeruzivo vasati vataurirana nekambani.
Iko kushanduka kwekushambadzira
ari tsika dzekutengesa dzechinyakare havasisina maitiro akafanana neavaimbove nawo. Nhau dzakanaka ndedzekuti shanduko yekutengesa pamhepo yakabvumidza kubuda kwe mazano matsva anoitirwa kuwana mukana pamusoro pemakwikwi.
Imwe yei nzira dzakanakisisa dzekutengesa iyo inounza mhedzisiro yakanaka kuunza chimwe chinhu chakakosha kune vangangove vatengi. Kana iwe uchikwanisa kupa chako chakanangwa vateereri chimwe chinhu chakakosha sechinhu chemahara, chidimbu cheruzivo, kana kunyangwe inonakidza kana inonakidza vhidhiyo, ipapo vanhu vanozonyanya kutora mukana.
Kushambadzira kwanhasi hakusi kwekutengesa cheteMuchokwadi, inotarisana nekumisa tambo yekutaurirana nevatengi. Naizvozvo, kana nhaurirano nemutengi inogona kutanga, saka kutengesa kunogona kutevera nzira yechisikigo. Kutengeswa Parizvino inovimba nekushandisa zvemukati, asi kwete chero chero zvemukati. Izvo zvinonakidza, zvechokwadi uye zvinonakidza zvemukati.
Makambani epamhepo Ivo havafanirwe kufungidzira pamusoro pekusimudzira zvigadzirwa zvavo. Ivo vanofanirwa kuve vane hanya nekuita vatengi vavo. Iko kushanduka kwekushambadzira kwazvino kunomutsa kudiwa kwevatengi kubatanidzwa kuti vauye pakutanga, iko kutenga kunouya gare gare.
Yakawedzerwa kune zvese izvi, kushambadzira nhasi kunoshandisa akawanda chiteshi, web analytics softwareUye zvakare, inobhadhara kutarisisa kunzvimbo yekutsvaga injini. Asi pamusoro pezvinhu zvese, kushambadzira kwepamhepo kunotarisa kune mutengi, pakuziva zvavanoda chaizvo. Naizvozvo, mushandirapamwe wekushambadzira unofanirwa kukanganiswa nedata rakawanikwa kubva kune vangangoita vatengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Kushambadzira kwashanduka sei uye nei izvi zvave zvakakosha
Iyo NFC tekinoroji inoshanda sei kuita nharembozha
SaAlyzer, ongorora uye utarise iyo Facebook Peji yeEcommerce yako